[MMAnime] So I'maSpider, So What? : Kumo Desu ga, Nani ka?
သူရဲကောင်းနဲ့နတ်ဆိုးဘုရင်တို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အတိုက်အခံလုပ်နေကြတဲ့ ကမ္ဘာကြီး၊ သူရဲကောင်းနဲ့နတ်ဆိုးဘုရင်ထံမှ ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့မှော်ကြီးက ကမ္ဘာတွေကိုကူးပြောင်းပြီး ထိုအထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုရဲ့ စာသင်ခန်းမှာ ပေါက်ကွဲသွားပါတော့တယ်။ ပေါက်ကွဲမှုမှာသေဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေက ကမ္ဘာခြားတစ်ခုမှာ ဝင်စားကြပြီး၊ အတန်းထဲမှာ အနိမ့်ကျဆုံးဂုဏ်သတင်းနဲ့ အဓိကဇာတ်‌ဆောင်ကတော့ ပင့်ကူလေးတစ်ကောင်အဖြစ် ဝင်စားပါတော့တယ်။ သို့သော်ငြားလည်း၊ သူက ခိုင်မာတဲ့စိတ်စွမ်းအားနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို မြန်မြန်နေသားကျသွားပါတယ်။ ဒါကတော့ ပင့်ကူတစ်ကောင်ဖြစ်လာပြီး အသက်ရှင်ဖို့ သူလုပ်နိုင်တာဘာမဆို ကြိုးစားရုန်းကန်‌နေရတဲ့ ပင့်ကူမလေးရဲ့ဇာတ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။